ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုကြည့်နေသည် Martech Zone
လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာအတွက် ATI Television ကဒ်တစ်ခု ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ငါညဘက်မှာစီမံကိန်းတွေလုပ်နေတုန်းပဲ၊ ငါ့ရုံးခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံပြီးရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တယ်။ ဒါကဖန်သားပြင်နှစ်ခုလုံးမနေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ ဒါနဲ့ငါ့ desktop ရဲ့ထောင့်က screen သေးသေးလေးမှာကြည့်လို့ရတယ်။
အမှန်တရားကိုပြောပြဖို့အချိန်ကာလတော်တော်များများမပြောင်းလဲသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်မှုအတွက်အတော်အတန်စောင့်မျှော်ခဲ့ပြီးယခုလှုပ်ခတ်နေပုံရသည်။ ပထမ ဦး စွာငါတက် loaded ဒီမိုကရေစီရုပ်မြင်သံကြား။ သူက Feed Reader လိုအလုပ်လုပ်ပြီးငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် Geekbrief တီဗီ… geek နည်းပညာပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရတာ Cali Lewis ကပြောတာကပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ ငါဒီမိုကရေစီနှင့်အတူအရပြေးနေတဲ့ပြrunningနာကစောင့်ကြည့်ပြီးကောင်းစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အရာတွေကိုခြေရာခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်များကိုစတင်ခဲ့သည်ကိုမသိရှိခဲ့ပါ။ ကောင်းသောနုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီ။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည် Joost။ ဝိုး! ငါကတက် loaded ချက်ချင်းသဘောကျခဲ့ပါတယ်။ အသုံးချနိုင်မှုသည်မျက်နှာပြင်အပြည့်၊ ၀ င်းဒိုးနှင့်မျက်နှာပြင်ငယ်တို့အကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ menu mouse ဘယ်လောက်များများပေါ်လာပြီးသဘာဝမောက်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားတာကိုလည်းငါသဘောကျတယ်။ မီနူးများသည်လည်း opacity ကိုများစွာ အသုံးချ၍ သင်နောက်ခံရှိပြသနာကိုအနှောင့်အယှက်မရှိဆက်လက်ကြည့်ရှုနားထောင်နိုင်သည်။ ဒါကကျိန်းသေထိခိုက်လိမ့်မယ်။
အချို့ကူညီပြီးနောက် မိတ်ဆွေများ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတွက်သူတို့တည်ဆောက်နေသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြင့်သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည် AppleTV။ ငါရက်ရောခြင်းနှင့် geek ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူခဲ့သည်။ ငါကအရမ်းများလွန်းတယ်၊ ငါသူတို့ကိုဘယ်တော့မှပြန်မပေးတော့ဘူးလို့သူတို့ကိုငါပြောခဲ့တယ် TV AppleTV သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရုပ်မြင်သံကြားကိုအမှန်တကယ်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်ကွန်ပျူတာမှသင့်ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြည့်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဟမ်လား Television အတွက် Ipod ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် AppleTV နှင့်တူညီသည်။ ဒီ interface က iTunes ဒါမှမဟုတ် iPod ကိုသုံးသလိုပဲခင်ဗျားရဲ့ PC နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လေ့လာချင်တာကကျွန်ုပ်၏မီဒီယာစာကြည့်တိုက်ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက် drive မှနေ၍ AppleTV သို့စည်းညှိခြင်းမလိုဘဲပစ်ချနိုင်ပုံဖြစ်သည်။ ငါ၌ကြီးမားသောဂီတစာကြည့်တိုက်နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဓာတ်ပုံများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကို local iTunes library တွင်ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကို port လုပ်ရုံသာ။ ငါသတိထားမိသည်မှာသင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင် iTunes အထုပ်တစ်ခုတည်းနှင့်သာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဒါကိုဟက်ခံရသည်အထိကျွန်ုပ်မစောင့်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ AppleTV ကိုအိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံး (shared2Macs,2PCs) အတွက် shared music library အဖြစ်အသုံးပြုချင်ပါတယ်။ ငါသတိထားမိခဲ့ တစ်စုံတစ် ဦး က OSTV ကို run ရန် AppleTV ကိုဖောက်ထွင်းပြီးဖြစ်သည်… hmmm ငါကြည့်နေတယ် Apple TV hacks.
ဒါမှမဟုတ် Joost က AppleTV နဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှာလား။ ဘယ်သူကသိတယ်၊ ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖုန်မှုန့်အနည်းငယ်နှစ်တွေဆက်ရှိနေမယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမစောင့်နိုင်ဘူး။
ပိုက်ကိုဖြုတ်ချခြင်းသည် browser များအတွက် Add-On ရွေးချယ်စရာများလည်းဖြစ်သည်။ Scoble သို့ ဦး တည်ချက် ABC သည်သူတို့၏ရုပ်မြင်သံကြားဘရောက်ဇာအသစ်နှင့်… WOW ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အဓိပ္ပါယ်ကမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး၊ interface ကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်။ သူတို့ကြည့်ရုံတင်မကအချို့သောပြပွဲရနိုင်လျှင်ယခု!
Tags: ရုပ်သံတီဗီcali Lewisကွန်ပျူတာရုပ်မြင်သံကြားDemocracy tvတီဗွီ။streaming များကဗီဒီယိုရုပ်မြင်သံကြား
အဝတ်လျှော်စက်များ vs. ရေတံခွန်များ - ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအမြင်
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 10: 17 AM
wow .. အလွန်အေးမြ။ Joost ကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။ သူတို့ရဲ့ beta sign up ဟာအခုအချိန်မှာကျနေပုံရတယ်။
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 10: 19 AM
သူတို့မှာဖိတ်ကြားမှုပုံစံရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာက၊ ငါဖိတ်စာ0ပဲခွင့်ပြုတယ်။ ငါအချို့သောအခြားရှေးရှေး5လူကိုဖိတ်ကြားနိုင်ခဲ့ကြ ... ငါမဟုတ်သော်လည်းငါသိ၏။ ဒီနံပါတ်ပြောင်းသွားရင်မင်းကိုငါထပ်ထည့်ပေးမယ်။
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 3: 35 pm တွင်
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 3: 39 pm တွင်
ငါ Joost မှဖိတ်ကြားခံရသည်၊ သို့သော်သူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲသည် Power PC ကိုမပံ့ပိုးကြောင်းထင်ရှားသည်။ Bugger!